मन्त्री भट्टको प्रश्न : अहिलेसम्म प्रचण्डले भनेको सबै कुरा के सत्य भएको छ र ? (भिडिओसहित)हेर्नुहोस
मन्त्री भट्टको प्रश्न : अहिलेसम्म प्रचण्डले भनेको सबै कुरा के सत्य भएको छ र ? (भिडिओसहित)
काठमाडौं, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री एवम् नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म भनेको के चाहीँ कुरा सत्य भएको छ र ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भने,‘प्रचण्डले अहिलेसम्म भनेको सबै कुरा के सत्य भएको छ र ? प्रचण्डले जे जे बोल्नुभएको छ, त्यो सबै सत्य छ र ? उहाँले भनेका सबै कुरा सत्य हुन सक्दैनन् । उहाँले कुन आवेशमा ? कहाँनिर भन्नुभयो ? उहाँ आ´वेशमा आएपछि के बोल्नुहुन्छ ? भन्ने कुरा उहाँले टुँडिखेलमा बोलेको कुरा पनि त थाहा छ नि तपाईँलाई ? पाँच हजारको जि´म्मा म लिन्छु ? अरु त अरुले लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा नेतृत्वले भन्ने कुरै होईन नि त । उहाँले कतिखेर के बोल्नुहुन्छ ? ठेगान हुँदैन् ।’
भट्टले अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पछिल्लो समय के के कुराकानी भयो ? भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको र बुझ्न नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पत्रकार धमलाले अब नेकपा फु´ट्ने भयो अरे हो ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘अब म पश्चिमतिर छु । मैले पनि तपाईँकै न्यूजबाट सुन्ने कुरो भयो । यथार्थ कुरो के हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । पार्टी नै फुट्ने कुराले त कसैको हित हुँदैन् । प्रधानमन्त्रीजीले पार्टी फु´टाउनुपर्छ भन्नुभयो भनेर मलाई लाग्दैन् ।’ आफू मन्त्रालय र व्यक्तिगत काममा गृहजिल्ला पुगेको उनले सुनाए । काठमाडौं फर्केपछि र नेताहरुलाई भेटेपछि कुरा बुझ्ने उनको भनाई छ । उनले हिजो पार्टी एकता गर्दा नै असम्भव भएपनि आफूहरुले एकता गरेर त्यसलाई सम्भ´व तुल्याएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि पार्टीलाई फूटबाट जोगाउन सकिने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘जनताले दिएको मतलाई नेताले भुल्नुहुँदैन् । हामीप्रति जनताको ठूलो आशा छ । भरोसा छ । यो कुरालाई कसैले पनि भुल्नुहुँदैन् ।’
उनले अध्यक्षद्धय ओली र दाहालबीच हिजो के कुरा मिलेर पार्टी एकता भयो ? अहिले के कारणले फुट्नुपर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ त ने´तृत्वले दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘त्यो कुरा हिजो किन आएन ? हिजो प्रचण्डले ओलीलाई चिन्नुभएको थियो कि थिएन ? नचिनिकन किन एकता गर्नुभयो ? अहिले कहाँनिर के मिलेन ? विचारमा नमिलेको हो कि भा´गबण्डामा नमिलेको हो ? त्यो कुरा त प्रष्ट पार्नुपर्ला नि । भागबण्डाको निम्ति पार्टी फु´टाउनुपर्छ भन्ने होईन् । नेताहरुलाई के पुगेन ? भन्ने कार्यकर्ताको मनोकां